Iyo Apple-1 inoshanda zvizere inotengeswa muBoston | Ndinobva mac
Iyo Apple-1 inoshanda zvizere inokwira kundari muBoston
Nhoroondo yeApple yakazvarwa muna 1976. Iro gore Steve Wozniak akagadzira uye akavaka wega komputa nemaoko ake. Shamwari yake, mumwe Steve Jobs, akazviona, akafadzwa, uye akagonesa waaishanda naye kuti aite mazana maviri uye vatengese muchitoro.
Kubva ipapo shamwari mbiri idzi dzakatanga kushanda nesimba ndokuvamba kambani yemakomputa inonzi Apple. Saka yakazvarwa imwe yemakambani makuru pasi rose. Zvino, imba yekutengesa yeBoston inoburitsa yakawanda neimwe yeaya mazana maviri emakomputa. Iyo yakazara kit yeApple 200 inoshanda zvizere. Tichaona kuti vanouya kuzobhadhara zvakadii.
Komputa inoshanda yeApple 1 iri kuenda kukosheni muBoston, kwavanotarisirwa kupihwa madhora mazana matatu. Iyo batch inonzi "Apple-1 Yakazara inoshanda Apple komputa ine Synertek C6502 CPU." Tsananguro yezvakataurwa inoti zvinotevera:
Inoshamisa uye inoshanda zvakakwana Apple 1 (inozivikanwawo seApple I kana Apple Computer 1), izere nezvose zvikamu uye zvishandiso zvinodiwa kuti ishande. Iyi kombiyuta yeApple-1 yakatengwa neSoftWarehouse, chitoro chemakomputa muWestern Michigan, muma80s sechikamu chebhizimusi remuchina mutsva weBMM. Yakazove yakaratidzirwa muchitoro mune yakasarudzika-yakavakirwa musamu-dhizaini imba isati yaiswa mune yekuchengetera. Iyi Apple-1 ichangobva kuratidzwa paPawn Stars akateedzana "Chikepe Chinoitika" (Mwaka 17, Chikamu 10).
Iyo Apple-1 inouya ne8K ye RAM uye inotsanangurwa se "imwe yemhando dzakanakisa dzeNATI dzinozivikanwa kusvika nhasi". Iyo zvakare inosanganisira yekutanga Apple Cassete interface, yekupedzisira keyboard kit, vintage vhidhiyo yekutarisa, magetsi, yako TV modulator, uye makopi ebhuku redzidziso.
Iyo seti yakadzoreredzwa gore rapfuura nenyanzvi, uye iri kushanda zvizere. Iyo ichangobva kuyedzwa ichishanda maawa masere yakatwasuka pasina chero kukundikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple-1 inoshanda zvizere inokwira kundari muBoston
Webhusaiti yeApple inova mutero kuvakadzi
Ndinoshuva dai Apple Watch iine aya maOppo Watch maficha